La tashi - SmartMe
Dom » la talin
soo dejiso .pdf
qaabka shaashadda oo buuxa
Waad ku mahadsan tahay xiisaha aad u qabto naqshadeynta, la-talinta iyo qaabeynta qalabka gurigaaga.
SmartMe Naqshadeeya guryaha casriga ah ee nidaamka deegaanka:
Nidaamyadu waa la jaan qaadi karaan Apple macruufka iyo Google Android.
Waxaan kuu diyaarinay xirmooyin xirmooyin qaabeynta nidaamka ah Kaaliyaha Guriga / HomeKit.
Fadlan ka dhex dooro ama qeex aragtidaada Guri Smart ah. Iyada oo ku saleysan aasaaskan, waxaan kuu diyaarin doonaa sicir-barar adiga.
Sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan adeegyada iyo xirmooyinka ayaa ku lifaaqan dalabkan.
Xulashada iyo diyaarinta liiska qalabka iyadoo la raacayo shuruudaha macaamiisha.
Qalabaynta nidaamka Kaaliyaha Guriga ee miniPC
Nidaamka HomeKit / HomeBridge qaabeynta nidaamka miniPC
Qaabeynta Smart Home
Ku darida qalabka nidaamka.
Qoondaynta aaladaha qolalka.
Diyaarinta desktop oo leh kaararka qalabka iyo horudhaca xuduudaha guriga.
150 PLN halkii saac-saac
Qiimaha ugu dambeeya ee mashruuca waxaa laga xaqiijinayaa hey'adda wax soo iibsaneysa intaan howsha la bilaabin.
* sicirada oo dhan waa qiime guud
** tirada saacadaha loo baahan yahay iyadoo ku saleysan qiimeynta
Warbixinnada degdegga ah (laga bilaabo dareemayaasha amniga) illaa taleefanka (riix, telegram, emayl) *
Ku dar kaamirooyinka Kaaliyaha Hoyga iyo qaabeynta tabs on desktop Kaaliyaha Hoyga iyada oo leh muuqaal toos ah, ogaanshaha dhaqdhaqaaqa iyo ogeysiisyada (kamaraddu waa inay lahaato hawlgal lagu ogaanayo) **
Ku darista astaamahaaga gaarka ah (muuqaalada ama otomatiga) qalab kasta.
Diyaarinta muuqaalada nalalka, tusaale subax wanaagsan, filim jacayl ah (illaa 10 muuqaal)
* qiimaha waa 10 qalab
** qiimaha waa 10 dareemayaal
Dejinta jadwalka toddobaadlaha ah ee aaladaha la xushay ee mashruuca ku dhex jira. *
Ku darida taleefannada casriga ah qof guri ahaan oo ku soo bandhigaya joogitaanka iyo goobta khariidada.
Qabatinka astaanta "qofna gurigiisa ma joogo" joogitaanka taleefannada casriga ah ee ku dhex jira noocyada WiFi ama goobta isticmaalayaasha.
Ku xakameynta qalabka Caawiye Google ku qoran Boolish. **
Guddi koontarool darbiga
Qaabeynta shaashadda xakameysa nidaamka darbiga.
* xirmo 10 jadwal
** Luuqad boolish ah oo la heli karo marka laga hadlayo xukunka taleefanka
Xulashada iyo diyaarinta liiska qalabka iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamilka ee qaabka kharashyada .xls 250 PLN.
Qiimaha waxaa loo dejiyaa si shaqsi ah, iyada oo ku saleysan naqshadeynta iyo shuruudaha macaamiisha.
Marka laga hadlayo qaabeynta goobta macaamiisha - qiimaha halkii kiilomitir 1 u jirta xarunta shirkadda ee Katowice 1,23 PLN.
Qiimaha la-talinta muddada-dheer - in ka badan 1 bilood - 1250 PLN / bishii
Xirmooyinka waa la isku dari karaa midba midka kale, looma baahna dhammaan qaybaha xirmo kasta.
Waxaan bixinaa la-talin iyo qaabeyn. Iyada oo qayb ka ah qaabeynta, waxaa suurtagal ah in lagu xiro aaladaha koronto ahaan, laakiin dhismaha waa inuu lahaadaa rakibid koronto oo si habboon loo diyaariyey.
Dunidaada oo dhan smart.